ကားလိပ်ဘီးလက်ကျန်အလေးချိန်အတွက်ကော်ကော်ဘီးအလေးချိန် SF2-6000ZCR၊ တရုတ်ကားဘီးလက်ကျန်အလေးချိန်အတွက်လိပ်ကော်ဘီးအလေးချိန် SF2-6000ZCR ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ၊ စက်ရုံ-NINGBO SUNSOUL AUTO ACCESSORIES CO ။ , LTD
ပြင်ဆင်ဖာထေးမှုများ, ရော်ဘာ String ဓာတုပစ္စည်း
Air Tools, Hoses နှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ
မူလစာမျက်နှာ>ထုတ်ကုန်များ>တာယာနှင့်ဘီးဝန်ဆောင်မှု>ဘီး Balance အလေးချိန်
အကြီးစား Dialial ပြုပြင်ရေးယူနစ်
အကြီးစား Duty ဘက်လိုက်မှု -Ply ပြုပြင်ရေးယူနစ်
Universal String-Type Inserts များ
PRC & စိုက်ပျိုးရေးတာယာအဆို့ရှင်
ဘီး Balance အလေးချိန်
တုရုမြို့ပြုပြင်ခြင်း Tools များ
တာယာ Mount Tools များ
ဘီးအခွံမာသီး & သော့ခလောက်
ဘီးနဂိုအတိုင်းဖြစ်အောင် & Adapter ကို
Air Chuck ပါ
Air Hose နှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ
Ningbo / ရှန်ဟိုင်း
T / T, L / C, D / P, PAYPAL, အနောက်တိုင်းပြည်ထောင်စု
Roll Wheel Balance Weights ၌ကားကော်အလေးချိန်အတွက်
အလွိုင်းအနားကွပ်အတွက် Wheel Balance
Aftermaket Wheel သို့မဟုတ် OEM
ဘီးအလေးချိန်အတွက်တစ်လလျှင် ၁၂၀ တန်/တန်
အရေအတွက် (သေတ္တာများ) 1 - 12 > 12
အီးအက်စ်တီ။ အချိန် (နေ့များ) 15 ညှိနှိုင်းရမည့်
5 G*1200 အပိုင်း
အမြင့်*အကျယ် = ၃.၈*၁၉ မီလီမီတာ
4boxes / CTN
►သံမဏိကော်ဘီးအလေးချိန် Balance SF2-6000ZCR
Standard ဥရောပစံနှုန်းနှင့်အညီသံမဏိ၊ ခဲမပါသောသံမဏိ
►ဇင့်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော၊ အဆိပ်မကင်းသောအကျီင်္ (Cool လျှင် Polymer Coated ပြီးနောက်)
►ချေးသည်ကို ၂၀၀ ကျော်ကျော်ခံနိုင်ရည်ရှိစေရန်ဆားမှုတ်ဆေးသည်စမ်းသပ်သည်။
►အလေးများသည်ကြိုတင်ဖြတ်ထားပြီးကြိုတင်တိပ်ထားပါသည်။ ဖြတ်တောက်ခြင်း၊ ကြိုတင်ပုံမချခြင်းနှင့်အမှိုက်များမရှိပါ။
alloy အလွိုင်းဘီးအမျိုးအစားအားလုံးကိုချိန်ညှိရာတွင်သုံးသည်။ ကားများ၊ ထရပ်ကားများ၊ ဗန်ကားများ၊ ဆိုင်ကယ်များအတွက်သင့်တော်သည်။
Q1 ။ သင်၏ကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ်ကုန်ပစ္စည်းထုပ်ပိုးမှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏လိုဂိုကိုတင်ရန်ဖြစ်နိုင်ပါသလား။
ဖြေ။ ။ စက်ရုံရှိတယ် စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ် သင်၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၊ လိုဂို၊ အရောင်၊ ကုန်ပစ္စည်းလက်စွဲ၊ ထုပ်ပိုးစသည်တို့စသည်တို့ဖြစ်သည်။ သို့သော်သင်အမှတ်တံဆိပ်ရှိပါကသင်၏တရားဝင်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ရရန်လိုသည်။
Q2 ။ သင်နမူနာအညီထုတ်လုပ်ရန်နိုင်သလား?
A: ဟုတ်ကဲ့, ငါတို့သည်သင်တို့၏နမူနာသို့မဟုတ်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာရေးဆွဲနေဖြင့်ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ ကျနော်တို့မှိုနှင့်လ်တာတညျဆောကျနိုငျသညျ။
မေး။ မင်းရဲ့ MOQ ကဘာလဲ။
A. MOQ သည် ၀ ယ်ယူရန်အတွက် ၀ ယ်ယူရန်အမြဲတမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်လည်း ၀ ယ်နိုင်သည် Trial Order အတွက်နမူနာတစ်ခု။
A: ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းအမျိုးမျိုးကိုရရှိနိုင်သည် PayPal, Visa, MasterCard, Alibaba ကုန်သွယ်ရေးအာမခံ၊ Western Union နှင့် T / T ။
Q5 ။ သငျသညျ FBA ပြည့်စုံစင်တာကိုတိုက်ရိုက်သင်္ဘောမှတစ်အိမ်မှလေတိုက်နိုင်ပါသလား?
A: ကျနော်တို့ပို့ပေးသည် အမေဇုံ FBA ဂိုဒေါင် ၀ န်ဆောင်မှု၊ UPC code အခမဲ့ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်တံဆိပ်ကပ်ပါစေ။အခမဲ့ HD ဓာတ်ပုံများ။
Q6 ။ အမှာစာပြီးပြီဆိုရင်ဘယ်လောက်ကြာမှာလဲ။
A: ယေဘူယျအားဖြင့်တော့ ONLINE ထုတ်ကုန်မဟုတ်ပါကယူဆောင်သွားပါလိမ့်မည် 30 ရက် 40 သင်၏သိုက်ကိုလက်ခံရရှိပြီးနောက်။ B: ကျွန်ုပ်တို့သည်အတွင်းသို့တင်ပို့သောအွန်လိုင်းအမှာစာအများစု 7-15 ရက်ပတ်လုံး ငွေပေးချေမှုကိုခံယူပြီးနောက်။
Q7 ။ သငျသညျပေးပို့အလုံးစုံတို့ကိုရှေ့တော်၌သင့်ဥစ္စာကိုစမ်းသပ်သလား?
A. ဟုတ်ပါသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်လုပ်မှုမှတဆင့်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုကိုအပြည့်အ ၀ ရရှိပြီးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမတိုင်မီ AQL စံဖြင့် QC မှနောက်ဆုံးစစ်ဆေးမှုရှိသည်။
A: ကုန်ပစ္စည်းရှိသည်, ကိုနှိပ်ပါ "အမှာစာစတင်" တိုက်ရိုက်ပေးဆောင်! ထည့် ၀ င်မှုပမာဏ၊ သင့်နိုင်ငံကိုရွေးချယ်ပါ၊ ပြီးနောက်သင်စုစုပေါင်းကုန်ကျငွေကိုတွေ့နိုင်သည်။ ) ကျေးဇူးပြု၍ ရေးပါ သင်၏အမည်၊ လိပ်စာ၊ စာပို့သင်္ကေတနှင့်ဖုန်းနံပါတ် ပေးပို့ဘို့!
A: ပြန်ကြားချက် <10 နာရီ။
B: ပို့ဆောင်ချိန် > 99% ။
C: အရည်အသွေးထိန်းချုပ်ရေး > 99%
D: ပြီးနောက်-အရောင်းဝန်ဆောင်မှု > 99%
E: 100% QC စစ်ဆေးခြင်း ကုန်ပစ္စည်းများ၏အချိန်မီပေးပို့မီ။
မူပိုင်ခွင့်© 2020 NINGBO SUNSOUL AUTO ACCESSORIES CO ။ , LTD